विमला राज्यद्वारा सम्मानित, मल्लको योगदानकोे कदर खोइ ? « KhelkudNews.com
विमला राज्यद्वारा सम्मानित, मल्लको योगदानकोे कदर खोइ ?
Published On : 18 October, 2014 7:14 am
दक्षिण कोरियाको इन्चनमा सम्पन्न १७ औं एशियाली खेलकुदमा नेपालको लागि एक मात्र पदक दिलाउन सफल कराते खेलाडी विमला तामाङलाई राज्यले सम्मान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार एक समारोहविच सम्माननिय प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले राज्यद्वारा घोषण गरिएको एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा कास्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रदान गरिने नगद पुरस्कार १० लाख सहित सम्मान पत्रबाट सम्मान गरे ।
१७ औं एशियाली खेलकुदमा नेपालले २५ खेलमा सहभागिता जनाएकोमा तामाङले करातेको एकल कातामा नेपालको लागि एक मात्र कास्य पदक हात पारेकी थिइन् । उक्त अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कोईरालाले श्रोत र साधनको अभावमा राष्ट्रले खेलकुदलाई आफ्नो प्रार्थमिकतामा राख्न नसक्नुका वावजुद खेलाडीले कास्य पदक प्राप्त गर्न सकेकोमा विमला तामाङलाई बधाई दिंदै आउंदो ८÷१० भित्रमा नेपाली खेलकुदले फड्को मार्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
खेलाडी तामाङले प्रतियोगितामा विजय पश्चात राज्यको झण्डा फराउन पाँउदा गौरव महसुस भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा आफु सम्मानित हुन पाउँदा हौसला अभिबृद्धि भएको बताईन् । यस हौसलाले आगामी दिनमा स्वर्ण पदक हासिल गर्न प्रेरणा मिलेको बताईन् ।
ध्रुब र पुरेन्दबारे नेतृत्वकोे धाराणा के ?
उक्त अवसरमा नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष पुरेन्द्र विक्रम लाखे र प्रशिक्षक ध्रुव विक्रम मल्ललाई सम्मान गरियो । तथापी यी बिमला तामांगलाई पदकको यात्रा गराउने यी दुुइ करातेकर्मीको बारे राज्य अस्पस्ष्ट रहेको छ ।
पुरेन्द विक्रम लाखृ अध्यक्ष रहेको नेपाल कराते महासंघ तथा केदाबर बाबु सिबाकोटी अध्यक्ष रहेको नेपाल सितेरियो कराते संघ विघटनको विरुद्धमा नेपाल खेलकुद महासंघ र युवा संघ नेपालले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । त्यो समयमा खेलकुद महासंघका अध्यक्ष रहेका पुरुषोत्तम पौडेल नै अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । करातेमा भएको राजनितीक हस्तक्षेपको विरुद्धमा बोल्ने खड्ग ओली नै अहिले सत्तारुढ दल एमालेको अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता छन् । ओलीले नेपाल बास्केटबल संघको कायक्रममा उपस्थित भएर खेलकुदमा राजनितीक हस्तक्षेपको विरुद्धमा आवाज उठाएका थिए । त्यसै समयमा ओलीलाई उपसिथ्त गराउने चाजोपाजो मिलाउने नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पा नै खेलकुद महासंघको महासचिव भएका कारण राखेपका उपाध्यक्ष भएका छन् । कराते महासंघ बारे राज्यको धारणा अझै अस्पष्ट हनुमा खेलकुद मन्त्री दृष्टिकोण हिन हुनुनै प्रमुख कारण मानीन्छ ।
यसैगरी बालाजु कराते एकेडेमीका प्रमुख ध्रुब विक्रम मल्लले लामो समय देखि सञ्चालन गरेको यसै एकडेमीबाट सुनील लामा, अनु अधीकारी र मल्लीका थापा जस्ता खेलाडी उत्पादन भएका छन् । माओबादी भात संगठन नेपाल गणतान्त्रीक खेलकुद महासंघका सस्थापक अध्यक्ष मल्लको कार्यकालमा त्यस संगठनाको प्रभाव ओज्सवी थियो । एमाओबादी सत्तारुढ भए पछि थुप्रै खेलकर्मी माओबादी आन्दोलनमै सरिक भएको भए पनि पछिल्लो समय माआ्बादी भएका युवराज लामा आश्चर्यजनक रुपमा सदस्य सचिव भएका थिए । मल्m अहिले सक्रिय राजननीतीबाट टाढा रहेका छन् ।
एसियाडमा राज्यले नचाहदा पनि मल्ल र राखेको प्रयत्नका कारण बिमलाले सहभागिता जनाएकी थिइन् । परन्तु कराते महासंघको लामो समय देखिको विवादमा कुनै समय आन्दोलनको घोषणा गर्ने मन्त्री पौडेल र लामा टेन्डी शेर्पाको भुमिका के हो ? सबैले उठाउने प्रश्न हा् ।
यसैगरी ध्रुब मल्लको योगदानको कदर फूलको गुच्छा मात्र हो या अन्य के हो ? राज्यले प्रस्ट पार्नेकी नपार्ने ?